"OHABOLAN'i Solomona. Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy; Fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny". Ohabolana 10: 1
Ry havana malala ao amin'ny Tompo ity indray ny sitrapon'Andriamanitra tonga mintsika anio, Araka ny voalazan'ny Soratra masina eto dia ny fahitana fa mila miankina tanteraka aminy isika, ary mila mangataka aminy mandrakariva ny fahendrena, mila manana ilay Fanahy Masina mandrakariva eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Hitantsika izany indrindra fa isika Ray aman-dreny eo amin'ny fiainana andavanandrontsika, raha manana zanaka maditra isika dia akory ny fahoriantsika manoloana izany? Fa raha hendry kosa dia mirehareha fa manana zanaka hendry sy manoa Ray aman-dreny. Dia toa izany koa ry havana ny Tompo Andriamanintsika, ilay Tompo be Fitiavana sady be famindram-po mandrakariva. Tsy tiany ny hahavery antsika ao anatin'ny fahotana sy ny fahaverezana. Hitantsika izany amin'ny Lioka 15:10. Dia toy izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, manatona azy mandrakariva aza mila aminy, fa Izy irery ihany no fanalahidin'ny fiainanao. Koa izany indrindra ary ry havana no tokony hitodihantsika mandrakariva amin'ilay Andriamanitra Ray sy Jesosy Krsty Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika.
Ho fanomanantsika ny fo amam-panahintsika amin'ny fiaviany amin'ny fahatsiarovana ny nahaterahany izao, mila miova fo isika, mangataha mandrakariva aminy fa Izy hanome tolon-tsaina mandrakariva anao. Ary izany no sitraky ny Raintsika izay any andanira, ka ataovy am-pinoana izany dia hohitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ho tonga fifaliana izany eo aminao sy eo amiko indrindra fa ilay Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.